सौगात नेपाल - साप्ताहिक
सौगात नेपालका लेखहरु
सौगात नेपाल, मंसिर ११, २०७५
यसले विशेषत: मानिसको दिमागले कसरी सोच्छ ? कसरी समस्या हल गर्छ ? कसरी निर्णय लिन्छ ? कसरी काम गर्छ ? जस्ता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्छ । यसको आरम्भ १९५० को दशकमै भएको थियो, तर यसको महत्वका बारेमा भने १९७० को दशकतिर मात्र थाहा भयो ।
कसरी कमाउँछ गुगलले ?
सौगात नेपाल, मंसिर २०, २०७४
गुगलको कुल आम्दानीको ९५ प्रतिशत रकम विज्ञापनबाट कमाइ हुन्छ । गुगल विज्ञापनबाटै धनी भैरहेको छ । गुगलको अनौठो र अपत्यारिलो कमाइ एवं ९५ प्रतिशत राजस्व संकलनको श्रेय गुगलका मुख्य दुई Advertising Platform 'Google Adsense' तथा'Google Adwords' लाई जान्छ ।